WARARKA – Page 13 – Qaran24
Mahad Cabdalla Cawad Guddoomiye ku Xigeenka labaad ee Baarlamaanka Golaha Shacabka ee Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay Maxabiistii ku Xirneed Dalka Hindiya ee maalintii shalay la keenay Dalka Hindiya ay tahay Talaabo wanaagsan oo ay qaaday Dowlada Federaalka Somaaliya.
Waxa una Guddoomiyeku Xigeenka Labaad ee Baarlamaanka tilmaamay in dhalinyarada ku Xirneed Dalka Hindiya ee ay ahayeen kuwa dhibaato kala duwan ay halkaas ku heystay,
laakin Mas’uuliyiinta dowlada somaaliya sida Ra’iisul wasaaraha,iyo sidoo kale Wasaarad kasta oo ka tirsan Dowlada Soomaaliya,
ayna Maanta Farxad weyn u tahay in Maxaabiis Soomaaliyeed oo ku Xirna Dalka dibadiisa ay ku Guleysatay in Dalkooda aygo Caafimaad qaba laga soo Celiyo.
Guddoomiye ku Xigeenka Labaad ee Baarlamaanka Golaha Shacabka ee Dowlada Federaalka Soomaaliya Mahad Cabdlla Cawad ayaa talaabada ay sameysay Xukuumadda Federaalka Soomaliya ay tahay shaqo aad u wanaagsan oo wax tar u leh Shacabka Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweynaha Masar Abdel-Fattah al-Sisi ayaa xaqiijiyay in uu doonaayo inuu u tartamo doorashada xigta ee dalkaaai.
Doorashadaasi ayaa noqon doonta tii saddexaad ee ka dhacda dalka Masar idii 3-dexaad ee tan iyo markii uu kacdoonka ka dhacay dalkaasi Masar, taasi oo sababtay in xilka laga tuuro Madaxweynihi hore ee Masar; Xusni Mubarak.
Sidookale sarkaal sare oo katirsan ciidamada Masar oo lagu magacaabo Sami Anaan ayaa isna xaqiijiyay inuu u tartamayo xilka madaxtinimada ee Masar.
Mr Sami ayaa bartiisa Facebook ga ku qoray inuu doonayo inuu soo afmeero dhaqaalaha dalkaasi ee u xiran milateriga oo keliya.
Hadalka Madaxweyne Sisi ayaa ah mid la filayay, waxaana loolanka madaxtinimada isaga baxay madaxii hore ee ciidamada cirka ee Masar Axmed Shafik.
Guddoomiye ku Xigeenka Arrimaha Bulshada Gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Shacabka Da’ta yahay ee ku Nool Degaanada Gobolka Hiiraan ay soo wajahday Xaalad adag kadib Markii sida uu tilmaamay ay Ganacsatii diideen in Lacata Sh:Somaliga qaar keed ay qadan wayeen,
waxa uuna tibaaxay in Dhibaatada ka jirta Gobolka Hiiraan looga baahan yahay in talaabo adag ay ka soo saarto Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Dhanka kale Sheekh Xuseen Cismaan Cali Guddoomiye ku Xigeenka Arrimaha Bulshada Gobolka Hiiraan ayaa hoosta ka xariiqay in hadda dhibaatada iyo arrimaha jira lais dhihi karo in Maamul Gobolka Hiiraan ay lug ku leeyihiin,
Madama Degmooyinka qaar aysan arintaas ka jirin,islamarkaana waxa uu Carabka ku dhuftay in Ganacsatada ay intee badan ay arintaas ay wadaan sida uu hadalka u dhigay.
Daawo Sawirada: Shil Diyaaradeed oo ka dhacay Garoonka Diyaaraha ee Aadan Cadde
Wararka anu ka heleyno Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay shegayaan in Goordhaw Gudaha Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde uu Shil Diyaaradeed ka dhacay.
Shilkaan Diyaradeed ayaa yimid kadib markii Diyaarad ay leeyihiin Midowga Yurub ay ku dhacday diyaarad kuwa shacabka ay raacaan oo taalay Garoonka Aadan Cadde.
Sidoo kale Diyaarada Shilka sameysay ayaa xilligaas rabtay inay meel Parking ah gasho, waxayna qaybta Runwayga ee Parkinada ah ugu tagtay Diyaarad kale oo xilligaasi taagneyd, sidaasina shilka uu ku dhacay, sida aan Wararka ku helnay.
Dhanka kale Sawirro laga qaaday Shilka diyaarada ayaa muujinaayay Baal ka mid ah Baalasha diyaarada oo si xun u bur buray.
Wararka qaar ayaa waxa ay tilmaamayaan in Diyaarada meesha taalay ee baalka uu ka bur buray ayaa waxaa leh Shirkad lagu magacaabo Galeyr oo sameysa safarada gudaha ee Muqdisho, xilligaasina waxa ay u taagneyd duulimaad inay qaado.
Sidoo kale Illo Wareedyo ku sugan Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ayaa ino sheegay in Labada Diyaaradood ee shilka galay ay ka daateen Shidaal badan oo ku jiray
Dad Ay Soomaali Ku Jiraan Oo Lagu Dilay Dalka Canada
Xalay Saqdii dhexe ayaa rag hubeysan waxa ay rasaas ku fureen goob ay isugu yimaadaan dad Soomaali u badan oo ku taalla Magaalada Toronto ee dalka Kanada.
Rasaaataas ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku geeriyooday ilaa laba ruux oo uu mid ka mid ah ahaa Soomaali kaas oo lagu Magacaabi jiray Nasrudiin Naasir halka labada kale ee dhaawacantay uu mid ka mid ah ahaa Soomaali.
Majirto cid sheegatay Masuuliyada dilkaas,iyada oo aysan jirin cid loo soo qabtay,waxaana Suxufi degan dalkaasi Kanada uu sheegay Ninka Soomaaliga ah ee geeriyooday ay Dhashay Haweeney Ganacsato Caanka ah Magaalada Toronto.
Booliiska Kanada ayaa waxa uu wadaa baaritaano ku Aadan sidii lagu ogaan lahaa dadkii ka dambeeyay dilka dadkaasi Soomaalida ay ku jiraan ee la rasaaseeyay.
Sikastaba dalka Kanada ayaa waxaa ku soo batay dilalka Soomaalida,iyada oo muwaadinkii ugu dambeeyay ee Sanadkii tegay ee 2017 la dilay uu ahaa Cabduqaadir Biixi.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo soo dhaweeyay 42 Maxaabiis Soomaali ah oo laga keenay dalka Hindiya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku dadaaleyso siideynta kuwo kale oo weli xiran.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa horay dalka ugu soo celisay muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xirnaa qaar ka mid ah Wadamada Caalamka,
waxana dadkaasi ugu dambeeyay 42 Ruux oo ku xirna dalka Hindiya balse haatan dalkooda Soomaaliya lagu soo celiyay.
Daawo Sawirada: Muwaadin Soomaaliyeed Oo Lagu Dilay Dalka Koonfur Afrika
Allaha u Naxariistee waxaa xalay dalka Koonfur Afrika lagu dilay Muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaas ku Ganacsada.
Muwaadinkaan oo lagu Magacaabi jiray liibaan Cali ayaa lagu dhex dilay Goobtiisa Ganacsi oo ku taalla Xaafada Sekoro ee dalkaasi koonfur Afrika.
Kooxdii Burcada ahaa ee Ganacsadaha dilay ayaa sida la sheegay qaatay qaar ka mid ahaa gabkii Ganacsi ee u yaallay kadibna Goobta ka baxsday.
Majirto cid ilaa iyo hadda loo qabtay dilkaas,waxaana dalka Koonfur Afrika ku soo batay dilalka loo geysanayo Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku Ganacsanaya dalkaasi koonfur Afrika.
Madaxweynaha Soomaaliya oo weli ku guda jira socdaalkiisii Gobolka Galgaduud ayaa maanta oo sabti ah ku wajahan Magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud.
Madaxweyne Farmaajo oo xalay ku hoyday Magaalada Guriceel ayaa kulan la qaatay Maamulka degmada iyo Bulshada qeybaheeda kala duwan,waxa uuna Shacabka iyo Maamulka Guriceel ku amaanay sida ay ula dagaalameen Al-Shabaab.
Madaxweynaha ayaa waxaa booqashadiisa ku wehliya Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Madaxa Xukuumadda Maamulka Galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan,Xildhibaano, Wasiiro iyo masuuliyiin kale.
Magaalada Cabudwaaq Wararka aan ka heleyno ayaa Maanta waxa ay sheegayaan in uu ka socdo diyaar garoow ku aadan soo dhaweynta Madaxweynaha,
waxana Magaalada laga taagay Calanka Soomaaliya iyo kan Galmudug,waana Magaalada uu deegaan ahaan ka soo jeedo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.